05 Aug, 2021 - 12:08 2021-08-05T12:21:23+00:00 2021-08-05T12:21:23+00:00 0 Views
Makadii? Ndotsvagawo murume ane makore 40 — 45 ari HIV+ anoda zvekuroora. Ndine makore 39 nemwana 1, nhamba dzangu 0776 208 363.
Makadii veTishamwaridzane? Ndanyora kawanda asi handizi kuburitswawo shambadzo yangu. Ndinotsvaga mukadzi ane makore 25 – 37 ari pachokwadi, anoda zvemusha. Ndiri kuMasvingo, nhare yangu 0773 544 975.
Hi Kwayedza, ndiri mukadzi ane makore 21, ndinotsvagawo murume wekufambidzana naye ane makore 23 – 30.
Asina chirwere uye ari pachokwadi ngaandibate pa0784 439 415.